Cirib-tirka cudurka Malaria
Duumadu ama maleeriyadu waa cudur aad u da' weyn, waana aafada ugu da'da weyn caalamka. Dulin-ku-nooleyaasha amaba noolaha sababa ee loo yaqaan Plasmodium, ayaa laga helay kaneeco lagu qabtay amber 30-milyan jir ah, laakiin cudurku run ahaantii wuxuu bilaabay inuu fido qiyaastii 10,000 oo sano ka hor, waqti isku mid ah markii ay bini'aadmigu bilaabeen inay degaan magaalooyinka, xoolaha la dhaqdo iyo beeraha u dhaqmaan. Dadku bilaabeen inay degaan magaalooyinka. xoolaha la dhaqdo iyo beeraha u dhaqmaan.
Tan iyo markaas, malaariyada ayaa malaayiin qof ku dishay adduunka oo dhan. Xitaa maanta, waxa u xanuunsada in ka badan 200 milyan sannadkii, waxayna dishaa ilaa 400,000 adduunka oo dhan, kuwaas oo intooda badan ku nool Afrikada Saxaraha ka hooseeya.
Tan iyo markii la bilaabay 2005-tii, Hindisaha Duumada ee Madaxweynaha Mareykanka ayaa hormuud ka ahaa dagaalka ka dhanka ah malaariyada. PMI oo ay maamusho Hay'adda Horumarinta Caalamiga ah ee Maraykanka, ama USAID, ayaa PMI ka caawisay ka hortagga 1.5 bilyan oo caabuqa malaaryada ah waxayna badbaadisay ilaa 7.6 milyan oo qof.
Oktoobar 6-deedii, PMI waxay soo saartay istaraatiijiyad cusub oo shan sano ah, oo loogu magac daray " Si Dhakhso leh u Jooji Duumada.” Qorshahan ayaa looga gol leeyahay in lagu baabi’iyo kaneecada jiil gudihiis, lagana qayb qaato hadafyada caalamiga ah ee lagu badbaadinayo in ka badan 4 milyan oo nafood, iyo in la baajiyo 1 bilyan oo kiis marka la gaaro 2025-ka.
Istaraatiijiyadda "Si Dhakhso leh u Jooji Duumada” waxay leedahay saddex ujeeddo. Marka hore, waxay ujeedadeedu tahay in la yareeyo dhimashada cudurka 33 boqolkiiba heerarkii 2015-kii ee culeyska sare ee PMI ee wadamada iskaashiga ah.
Marka labaad, PMI waxay ku dadaali doontaa inay hoos u dhigto boqolkiiba 40 marka loo eego heerarkii 2015, dhacdooyinka malaariyada ee ka dhex dhaca dadweynaha wadamada iskaashiga la leh PMI oo leh culeys sare iyo dhexdhexaad ah.
Ugu dambeyntii, PMI waxay rajaynaysaa in ay keento ugu yaraan toban waddan oo ah kuwa iskaashiga la leh PMI si loo ciribtiro malaariyada oo ay caawiso ugu yaraan hal waddan oo ku yaala Subregion Greater Mekong si loo baabi'iyo cudurka.
Laga bilaabo Oktoobar 6, fursadaha PMI ay ku gaari karto yoolalkan ayaa si weyn u kordhay marka lagu daro qalab cusub: hadda waxaa jira tallaalka ka hortagga malaariyada. "Oktoober 6, Ururka Caafimaadka Adduunka wuxuu ku taliyay in la isticmaalo tallaalka ugu horreeya ee lagula dagaallamayo malaariyada," ayuu qoray Dr. Raj Panjabi, Isuduwaha Duumada Caalamiga ah ee Maraykanka, oo hoggaamiya Hindisaha Duumada ee Madaxweynaha Maraykanka. "Tani waa tallaalkii ugu horreeyay ee gacan ka geysta dhimista khatarta duumada ba'an ee dilaaga ah ee carruurta yaryar ee ku nool Afrikada Saxaraha ka hooseeya, halkaas oo cudurku uu weli yahay dilaaga ugu horreeya," ayuu yiri.
“Afartan waddan ayaa hadda meesha ka saaray malaariyada. In kasta oo wax badan ay dhiman yihiin, haddan la dagaallanka aan kula jirno masiibadeena ugu da'da weyn waxay bixineysaa casharro lagula dagaallamayo masiibadeena ugu cusub iyo tan soo socota."